🥇 ▷ Warbixinta Movistar ayaa ku eedeeysay faa iidada ilaa labo sano iyo badh Entel iyo Claro marka loo eego 5G ✅
Warbixinta Movistar ayaa ku eedeeysay faa iidada ilaa labo sano iyo badh Entel iyo Claro marka loo eego 5G
Shirkada caasimada Spain, Movistar, oo leh boqolkiiba 21.8 suuqa Chilean, u xilsaaray daraasad ku saabsan shuruudaha tartan ee suuqyada isgaarsiinta, marka la eego imaatinka 5G ee Chile. Warbixinta farsamada iyo dhaqaalaha ayaa lagu sheegay G&C Consultores.
Daraasadda waxaa sameeyay injineerrada Roberto Gurovich, Ricardo Raineri iyo Miguel Angel Mallo, Waxaa lagu soo bandhigay shirkada horteeda maxkamada difaaca ee tartan bilaash ah (TDLC), sababtuna waa wada tashiga ay galeen Undersecretariat of Isgaarsiinta (Subtel) si ay u qeexdo xadka xawaaraha cusub.
Marka loo eego falanqaynta, Shirkadaha Claro iyo Entel waxay lahaan doonaan horumar inta udhaxeysa 21 iyo 29 bilood marka loo eego tartankooda. Faa’iidadaas darteed, shirkaduhu waxay ururin karaan inta udhaxeysa $ 212 milyan iyo US $ 500 milyan in kabadan shirkadaha dib loo howl galiyo.
Si loo fuliyo xisaabaadkan, la taliyuhu wuxuu tixgeliyay waqtiga ay ku qaadatay keenista tikniyoolajiyadda 4G, oo ay ka mid ahaayeen dhismaha kaabayaasha, iyo sidoo kale mashruuca ganacsiga. Sida ay qabaan khubaro, Tani kaliya saameyn kuma yeelan doonto dakhliga shirkadaha kale, laakiin sidoo kale saamigooda ay ku leeyihiin suuqa. Entel iyo Claro waxay ku hormarin karaan ilaa 20% qorista macmiilka.
Faa’iidadan oo ugu yaraan laba sano ah, oo ay qortay Entel iyo Claro, Waxay inta badan u sabab tahay tirada muuqaalka ay ku leeyihiin band 3,5 GHz, inta jeer ee noqon doona mid ka mid ah hindisooyinka sida uu sheegayo Subtel. Qaybtaan ‘Entel’ waxay leedahay 100 MHz, halka Claro oo leh 50 MHz.
Waa in lagu xasuustaa taas Movistar wuxuu leeyahay isla 50 MHz, laakiin kaliya wuxuu ku yaal laba gobol oo dalka ah, kana duwan tartankeeda taas oo leh qaran ahaan. Dhinaceeda, Wom wax muuqaal ah kuma leh kooxdan.
La taliyayaasha inta badan dhaleeceeyaan Subtel iyo sidoo kale Xeer Ilaaliyaha Dhaqaalaha Qaranka (FNE), kuwa ku dacwaynaya inayan ka fiirsan dhinacyadan wada tashiga.
Xigasho: Joornaalka Maaliyadeed
Maxaad u aragtaa mowqifka Movistar?